တရုတ် BOPP အိတ် HC-07 ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | Hengrong ပါ
အရောင်: အဖြူ၊ အနီ၊ အနက်၊ မည်သည့်အရောင်မဆိုသင်၏လိုအပ်ချက်အတိုင်း
အရောင်ဖိုင်လ်: max 2S/8C
ယက်လုပ်ခြင်း: ၉ × ၉၊ ၁၀ × ၁၀၊ ၁၂ × ၁၂ သည်သင်၏လိုအပ်ချက်အတိုင်း
အထည်အလေးချိန်: 70gsm မှ 150gsm
အကျယ်: ၃၀ စင်တီမီတာမှ ၁၀၀ စင်တီမီတာ
ထိပ်တန်း: လှိုင်းဖြတ်ခြင်း၊ သံမဏိ၊ ultrasonic လှိုင်း
အောက်ခြေ: တစ်ခုတည်းခေါက်/ တစ်ခုတည်း (သို့) နှစ်ချက်အပ်ချုပ်၊ နှစ်ထပ်ခေါက်/ တစ်ခုတည်းအပ်ချုပ်
Denier: 700D မှ 1000D
အထည်အလေးချိန်: ၄၅ ဂရမ်မှ ၁၅၀ ဂရမ်အထိ
ရေစိုခံ၊ ၎င်းတွင် laminated သို့မဟုတ် PE liner
အသုံးပြုမှု: သဲ၊ သကြား၊ ပင်လယ်စာ၊ ဓာတ်မြေသြဇာ၊ ဘိလပ်မြေစသည်
ထူးခြားချက်-UV ကိုရေဒဏ်ခံနိုင်၊ ယိုစိမ့်မှု၊ ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း
Brand Name ပါ
100% အပျိုစင် PP
အဖြူ၊ အနီ၊ အပြာအပြာအစိမ်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်အရောင်အဖြစ်
အပူဖြတ်ခြင်း၊ အအေးဖြတ်ခြင်း၊ လှိုင်းဖြတ်ခြင်း (သို့) ခေါက်ခြင်း
၂၃ စင်တီမီတာ-၁၅၀ စင်တီမီတာ
PP polypropylene ယက်အိတ်
9 × 9,10 × 10,12 × 12 သင့်လိုအပ်ချက်အတိုင်း
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်၊ ရေဒဏ်ခံနိုင်၊ ယိုစိမ့်မှု၊ ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်သည်
1. Coating & Plain bags: အများဆုံး အရောင် ၅ ရောင်
2. BOPP ရုပ်ရှင်အိတ်များ: Max အရောင် ၁၀ ရောင်ပါ
Anti-slip သို့မဟုတ်ရိုးရိုးသို့မဟုတ် laminated/Coated
ဆန်၊ ဂျုံမှုန့်၊ ဂျုံ၊ ကောက်နှံ၊ အစာ၊ ဓာတ်မြေသြဇာ၊ သစ်ကြားသီး၊ အာလူး၊ သကြား၊ ဗာဒံစေ့၊ သဲ၊ ဘိလပ်မြေ၊ အစေ့များစသည်တို့ကိုထုပ်ပိုးသည်။
အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်း၊ အရည်အသွေးမြင့်၊ ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးရန်အဆင်ပြေသည်
အရောင်ပုံနှိပ် (BOPP) ယက်အိတ်ကိုမြွေအိတ်ဟုလည်းလူသိများသည်၊ ကုန်ကြမ်းသည်ယေဘူယျအားဖြင့် polyethylene၊ polypropylene နှင့်အခြားဓာတုပလတ်စတစ်ကုန်ကြမ်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဓာတုပလတ်စတစ်အမျိုးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်သော်လည်းသေးငယ်သော်လည်း၎င်း၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုသည်အားကောင်းပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာကြီးမားသည်။ ခေတ်သစ်စက်မှုလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်၌စက်မှုလုပ်ငန်းမျိုးစုံသည်ဒေသအလိုက်ခွဲခြားထားသဖြင့်အဝေးမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည်ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၌ထုတ်ကုန်များမပျက်စီးရန်သေချာစေရန်ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများလိုအပ်သည်။ မရ။
၁၊ အရောင်ပုံနှိပ်ထားသောယက်အိတ်ပစ္စည်းသည် polypropylene PP ဖြစ်သည်။
၂။ ၎င်းကိုဆန်၊ အစာ၊ ဓာတ်မြေသြဇာနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများတွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။
၃၊ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ-၃၀ စင်တီမီတာ-၇၅ စင်တီမီတာ၊ M ခေါက်၊ အရှည်အကန့်အသတ်မရှိ၊ အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ laminating သို့မဟုတ်သာမန်ပုံနှိပ်နိုင်သည်။
၅၊ ကုန်ကြမ်းဖွဲ့စည်းမှု - polypropylene PP, OPP အရောင်ပုံနှိပ်ရုပ်ရှင်၊ အလူမီနီယမ်ဖလင်နှင့်အခြားပစ္စည်းများ
ပထမဆုံးအနေနဲ့ထုတ်လုပ်မှုရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်ဒီရင့်ကျက်တဲ့ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာမှာလူတွေကပိုပိုပြီးရိုးရှင်းတဲ့ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာတွေဖြစ်လာတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနဲ့ကုန်ကြမ်းထုတ်လုပ်မှုတွေကိုသုံးတာကအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်၊ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် ထုတ်ကုန်တစ်ခုလုံးအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောထိန်းချုပ်မှုကိုရရှိခဲ့ပြီး၊ ဤထုတ်ကုန်ကိုစျေးကွက်ထဲ ၀ င်ပြီးနောက်ဤထုတ်ကုန်ကိုခွင့်ပြုပါ၊ ၎င်းသည်ယက်အိတ်၏အကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်သောထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးမှုကုန်ကျစရိတ်ကိုတိုးတက်စေသည်။
ဒုတိယအချက်မှာသုံးသောရှုထောင့်မှကြည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိပလပ်စတစ်ယက်အိတ်အမျိုးအစားမည်မျှပင်ရှိသည်၊ မည်သည့်ပစ္စည်းအမျိုးအစားဖြစ်သည်၊ ထုပ်ပိုးမှု၏အလေးချိန်သည်အတော်လေးပေါ့ပါးသည်၊ ထုတ်ကုန်များစွာအတွက်ထုပ်ပိုးရန်သင့်တော်သည်။ ထုပ်ပိုးမှုကိုလည်းပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ယခုလက်ရှိကျွန်ုပ်တို့တွေ့နေရသောထုတ်ကုန်အများစု၏ထုပ်ပိုးမှုသည်တာရှည်ခံမှုရှိပြီးပျက်စီးရန်လွယ်ကူသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်အသုံးပြုမှုဖြစ်စဉ်တွင်ထုတ်လုပ်ထားသောဆုံးရှုံးမှုကိုလျော့နည်းစေလိမ့်မည်။
ယခင်: BOPP အိတ် HC-၀၆
22 Lbs အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစားအစာ Bopp အိတ်
Pp Woven Bulk Bag များ
စိတ်ကြိုက် Polypropylene အိတ် ၂၅ ကီလို ၅၀ ကီလို PP PP